Oghere dị na Algom na Alloy China Manufacturer
Nkọwa:Ọnụ ụzọ mepere emepe maka Villa,Garage na Exiterior Door Installation,Dị ka Ụlọ Nzukọ Garage Dị
Home > Ngwaahịa > Na-aga n&#39;ihu n&#39;Ọnụ Ụzọ > Ogige ụlọ ọrụ na-echekwa ebe obibi > Oghere dị na Algom na Alloy
Oghere dị na Algom na Alloy
Ihe Nlereanya.: HF-J632
Ọnụ ụzọ nke oghere ụlọ mposi bụ nke dị elu nke ike, nke siri ike na nke na-adịgide adịgide na-eguzogide ya, nke na-eji usoro ntinye akwụkwọ ntụ ntụ ike iji zụọ ọka osisi. Ụlọ ụgbọala ụgbọala na-eji ụgbọala eme ihe na-eji usoro ọrụ dị elu ma na-eji ọgba agọ hofic mee ngwa ngwa mepee ọnụ ụzọ nkwụsị ụgbọala, ọ bụghị dị ka nwayọ dị ka ebe a na-arụgharị ụgbọala. N'otu oge ahụ, mmetụta nke mmechi ngwa ngwa nwekwara ike igbochi ihe ndị ọzọ ịbanye.
ihe onwunwe: aluminum alloy, 2.0mm ọkpụrụkpụ
panel: a na-edepụta osisi na-ekpuchi elu, ihe ndị na-emepụta ma na-etinye igbe dị iche iche, nkedo nchedo aka, panel thickness 40mm.
agba: chaa na-acha ọcha (ogbe na-acha ọcha, ọka osisi a ma ama, ọka ọla kọpa)
Ngwá ọrụ: obibi akwụkwọ, ihe dịka sentimita 2.5, ụda mmiri nke 82B
Usoro nchịkwa ụlọ na-arụ ọrụ nwere ike iji njikwa nchịkwa, njikwa APP, njikwa ekwentị na usoro ọgụgụ isi na-ejikọta ụgbọ ala njikọ.
N'ihe banyere njikwa ike, a ga-ahazi ụlọ mposi na nchekwa ike ma ọ bụ nwere ike iwepụ ya aka. A na-atụ aro ka ị jiri ike ọkọnọ nkwado ndabere. E nwere ike ịhazi ụdị nke ọnụ ụzọ ụzọ maka ụdị ndị ọzọ.
Akwụsị ụgbọala na-adọba ụgbọala / Nnukwu ọkpụkpọ ọnụ ụzọ / Industrial Roller Shutter
1. Usoro nchịkwa na-adabere na ịdabere na ya.
2. Ogwe aka na-edozi elekere.
3. Ụkpụrụ nchebe ezumike mmiri.
4. Ụdị nchekwa nchekwa ezumike.
1. MOQ ala: Otu setịpụrụ dị maka ịlele àgwà anyị nke ọma.
2. Ezi Mma: Onye ahịa gị na-enwe afọ ojuju na àgwà anyị. Ị nwere ike nweta ezigbo aha site n'ahịa gị ma nweta ihe ndị ọzọ.
3. Ezi ọrụ: Ọrụ ọrụ anyị tupu ma ọ bụ mgbe ịre ahịa.
4. Ego ezi uche
5. OEM nabatara
Ogwe akpaaka na-arụ ọrụ na akpaaka Kpọtụrụ ugbu a
Akpaaka Akpaka Akwụsị na Ụlọ Elu Garage na Windows Kpọtụrụ ugbu a
Akwụsị ụgbọala na-emegharị ụgbọala Kpọtụrụ ugbu a
Oghere dị na nchara Oghere Ụlọ Ọrụ Kpọtụrụ ugbu a
Oghere Nkeji Akara Elu Ụlọ Elu Garage Kpọtụrụ ugbu a
Polyamthane ụfụfụ na-esi n'ọnụ ụzọ windo windo Kpọtụrụ ugbu a
ulo oru n 'ulo oru ugbo ala maka ulo gi Kpọtụrụ ugbu a
Drum maka ọkọlọtọ ọkọlọtọ maka Ụlọ Kpọtụrụ ugbu a
Ọnụ ụzọ mepere emepe maka Villa Garage na Exiterior Door Installation Dị ka Ụlọ Nzukọ Garage Dị Ọnụ ụzọ mepere emepe Ọnụ ụzọ mepere emepe dị na Ritehite Ọnụ ụzọ mepere emepe na-adọba ụgbọala Mepee Ọnụ Ụzọ Mepere emepe ngwa ngwa Oghere ọnụ ụzọ mpempe aka